2009-07-12 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကဲ ​မ​ထူး​တော့​ပါ​ဘူး​ဆို​ပြီး screen saver ​ပါ ​ပေါင်း​ပြီး​တင်​ပေး​လိုက်​တယ်​နော် .. Halloween ​ဆို​တာ​ကို​သိ​လား ... ​သ​ရဲ​ည​လို့​တင်​စား​ထား​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​ည​မှာ ​သ​ရဲ​ချောက်​ကြ​တာ​ပါ ​တစ်​ယောက်​နဲ့​တစ်​ယောက် ​နောက်​ကြ​တာ​ပေါ့ .. ​ပျော်​စ​ရာ​အ​လွန်​ကောင်း​ပါ​တယ် ..
Download rapidshare ၊ Download deposites ၊ Download megaupload
​စိုး​ကြီး: ​ကျွန်​တော်​ကို​ညီ​ဆီ​က​ရ​တဲ့​အ​ဖြူ​ရောင်​သံ​စဉ် ​ကုဒ်​ကို​ကူး​ထား​တယ်​ဒါ​ပေ​မယ့်​သီ​ချင်း​ပြောင်း​ချင်​တယ် .. html ​ကို​လည်း​နား​လည်​သင့်​သ​လောက်​နား​လည်​ပါ​တယ် ...
<center><embed pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" loop="true" autostart="false" showstatusbar="true" type="application/x-mplayer2" height="48" src="​သီ​ချင်း​ရဲ့ URL​ကို​ထည့်​ပါ" width="280" enablecontextmenu="false" name="mediaplayer1"/></embed></center>
​သီ​ချင်း​ရဲ့ url ​ဆို​တာ​က​တော့
(၁) http://www.fileden.com/ ​မှာ account(free) ​တစ်​ခု​လုပ်​လိုက်​ပါ
(၂) ​အောက်​မှာ ​ပုံ​တွေ​နဲ့ ​အ​ဆင့်​ဆင့်​ပြ​ထား​ပါ​တယ် .. ​ကြည့်​ပြီး​လုပ်​လိုက်​ပါ
(၃) ​ဖိုင်​ကို​တင်​ပါ ​တင်​ပြီး​တာ​နဲ့ Direct url link ​ကို ​ကော်​ပီ​ကူး​ပြီး​အ​ပေါ်​က ​သီ​ချင်း​ရဲ့ URL ​ကို​ထည့်​ပါ ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ထည့်​လိုက်​ပါ ...
​ဖိုင်​ကို ​အ​ပေါ်​က​လို ​ဆိုက်​ကို​ဝင်​လိုက်​ပါ...
​အ​ခု​လို​မျိုး ​သီ​ချင်း​တင်​လိုက်​ပါ ..
​အ​ခု​လို​မျိုး direct URL link ​ကို ​ကော်​ပီ​ကူး​ပြီး ​ဟိုး​အ​ပေါ်​က ​သီ​ချင်း​ရဲ့ URL ​ကို​ထည့်​ပါ ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ထည့်​လိုက်​ပါ ... ​ကဲ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​ပြီ​လို့​ထင်​ပါ​တယ် ...
photoshopcs2: Password ​မှား​တာ​လား​မ​သိ​ဘူး.. ​ဒီ​မ​နက်​တစ်​မ​နက် ​လုံး​မှာ ​အဲ​ဒါ​ဘဲ​ခွဲ ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​သူ​က wrong Password ​ဘဲ​ပြော​တယ်. Passowrd ​က ​ဒါ​ဘဲ​မ​လား www.nyinaymin.net
​ဟုတ်​ပါ​တယ်​ဗျာ .. www.nyinaymin.net ​ပါ​ပဲ .. ​ဖိုင်​ဖြေ​တဲ့​အ​ခါ​မှာ part 1 ​ကို right click ​ထောက်​ပြီး​ဖြေ​ရ​မှာ​ပါ . ​ဖိုင်​ဖြေ​မယ့်​အ​ချိန်​မှာ ​ဖိုင်​အ​တွေ​အ​ကုန်​လုံး​ကို Download ​လုပ်​ထား​ဖို့​လို​သ​လို . ​တစ်​နေ​ရာ​တည်း​မှာ​ပဲ ​စု​စည်း​ထား​ဖို့​လဲ​လို​ပါ​တယ် ..
mgsanda: ​အစ်​ကို......​နည်း​နည်း​ဂျီ​ကျ​ချင်​လို့ *.vcr movie ​လေး​တွေ​ကိ *.avi (or) *.mpeg ​ပြောင်း​ချင်​လို့
​အောက်​မှာ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ​မောင်​ဆ​န္ဒ​ရေ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင်​ပြော​ပါ ..
AVSCapture ​ကို​လို​ချင်​ရင် ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​ပါ ..
Powervideostudio ​ကို​လို​ချင်​ရင် ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​ပါ .. (.exe)
Powervideostudio ​ကို​လို​ချင်​ရင် ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​ပါ .. (.zip)
yahoo messenger ​ချက်​နေ​စဉ် ip address ​ကို ​ဘယ်​လို​သိ​နိုင်​လဲ
​ထွန်း​ထွန်း : yahoo messenger ​နဲ့ chat ​နေ​ရင်း ​တစ်​ဖက် ​လူ​ရဲ့ ​နေ​ရာ​နဲ့ ​လိပ်​စာ ​ကို ​အ​တိ​အ​ကျ ​ဖော်​ပြ​ပေး​နိုင်​တဲ့ software ​ရှိ​ရင် ​ဝေ​မျှေ​ပး​ပါ​လား..
​ကို​ထွန်း​ထွန်း​အ​ခု​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တဲ့ ip address ​နဲ့ ​နေ​ရာ​ကို ​သိ​ချင်​ရင်​တော့ ​ဒီ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ .. ​အဲ့​ဒါ ​အ​ခု ​ကို​ထွန်း​ထွန်း​သုံး​နေ​တဲ့ ip address ​နဲ့ ​နေ​ရပ်​လိပ်​စာ​ပါ ...
​နောက်​တစ်​ခု​က yahoo messenger ​ကို chat ​နေ​စဉ်​အ​တော​အ​တွင်း​မှာ ip ​လိပ်​စာ​ကို​သိ​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​မှာ movie ​အ​နေ​နဲ့​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် .. run ​က​နေ ​ကွန်​မန်း ​ရိုက်​ပြီး ​လုပ်​ရ​မှာ​ပါ .. ​အ​ဆင့်​တွေ​က​တော့ movie ​နဲ့​ပြ​ထား​တာ​မို့ ​နား​လည်​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ် .. ​ကျွန်​တော့်​ဖက်​က ​အ​သေး​စိတ်​မ​ရေး​ပေး​နိုင်​တာ​ကို​တော့ ​နား​လည်​ပေး​ပါ​လို့ . ​နောက်​ပြီး ​အ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ကို ​သေ​ချာ​နား​လည်​အောင် . ​ကိုယ့်​ဟာ​ကိုယ်​ပဲ ​ကြိုး​စား​ပေး​ပါ ... ​အဲ့​လောက်​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ် ..
​အောက်​မယ် Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ ...
ifile.it ၊ Megaupload ၊ 4shared ၊ mediafire ၊